Ndị na -emepụta igwe na ndị na -ebubata igwe China | IVEN
Disposable ntụtụ ịgbakọta Line
A na -eji igwe mgbakọ Syringe anyị maka ịgbakọta sirinji na -akpaghị aka. Ọ nwere ike iwepụta ụdị sirinji niile, gụnyere ụdị mmịpụta luer, ụdị mkpọchi luer, wdg.
Igwe eji eme ntụtụ anyị na -anabata LCD ngosi iji gosipụta ọsọ nri, ma nwee ike ịhazigharị ọsọ ọgbakọ iche, na -agbakọ elektrọnik. Arụmọrụ dị elu, oriri ike dị ala, mmezi dị mfe, arụ ọrụ kwụsiri ike, mkpọtụ dị ala, dabara maka ụlọ ọrụ GMP.
Igwe eji agbakọta igwe anyị na -anabata ngosi LCD iji gosipụta ọsọ nri, ma nwee ike ịhazigharị ọsọ ọgbakọ iche iche, na -eji agụta elektrọnik. Arụmọrụ dị elu, oriri ike dị ala, mmezi dị mfe, arụ ọrụ kwụsiri ike, mkpọtụ dị ala, dabara maka ụlọ ọrụ GMP.
Igwe mgbakọ sirinji anyị nwere sistemụ nri na usoro mgbakọ.
Sistemụ nri: nye sirinji 4 (plunger/stopper/agịga/gbọmgbọm) na usoro mgbakọ.
Sistemụ nri gụnyere ihe oriri na onye na -enye centrifugal maka gbọmgbọm/plọp, hopper na feeder maka agịga/nkwụsị.
Sistemụ nri nwere ihe mmetụta fotoelectric, mgbe usoro nchịkọta juputara na ngwaahịa ọ ga -akwụsị inye nri, na mgbe enweghị ngwaahịa ọ ga -amalite ịrụ ọrụ na -akpaghị aka.
Usoro Mgbakọ:kpọkọta akụkụ niile nke ngwa ọnụ dịka ngwaahịa emechara. Ọ na -abụkarị, ọ na -emecha omume 3: ime ihe 1 - jiri ihe mkpuchi rọba kpọkọta plọp; ihe 2 - jiri agịga kpọkọta gbọmgbọm; ihe 3 - jiri ihe nkwụsị na -agbakọ plunger na gbọmgbọm na agịga.
Ngalaba Nka na ụzụ:
Nkọwapụta dabara adaba 2 ml ~ 50 ml
Ike Mmepụta 150-250pcs/min
N'ozuzu Dimension 4200*3000*2100mm
Ịnye ọkụ AC220V/3KW
Igwe ikuku ikuku abịakọrọ 0.3m³/min
Ndepụta nhazi isi
Ntụgharị ugboro ugboro Mitsubishi (Japan)
Ụgbọ ala Taizhou, China
Onye na -ebelata Hangzhou, China
Kemeghi-ọsọ moto Mitsubishi (Japan)
Sistemụ njikwa Otu obere mgbawa microcomputer
Ihuenyo mmetụ aka China
Sistemụ ihe ọhụụ CCD KEYENCE (Japan)
Ihe ụlọ SS 304, ọla a tụrụ atụ
Mkpuchi uzuzu Aluminom profaịlụ
Nke gara aga: Igwe ịsa mmiri na -ejuputa igwe
Osote: Agụụ Ọbara mkpokọta tube Production Line
akụrụngwa ọgwụ mgbochi
Usoro mmepụta ọgwụ mgbochi
igwe na -emepụta ọgwụ mgbochi
Igwe Njuputa Ejuju Ejupụtara, Ampoule Machine À Coudre Bernina, Igwe eji emejuola agịga, Igwe Ampoule À Coudre Singer, Disposable ntụtụ & agịga Production Line, Igwe Ampoule À Coudre Led,